घर, गाडी किन्न कुन बैंकको स्थिर ब्याज कति? :: कमल नेपाल :: Setopati
घर, गाडी लगायत व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिका कर्जामा बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर लागू गरेका छन्। ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मै ब्याजदर घटबढ नहुने शर्तमा बैंकहरूले यस्तो ऋण दिन्छन्।
बैंकहरूले ऋण चुक्ता नहुन्जेल बारम्बार ब्याजदर बढाउने समस्यापछि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कात्तिकदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो। योसँगै अहिले सबै बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर तोकेका छन्।
तर स्थिर ब्याजदर परिवर्तनशीलभन्दा साढे ३ प्रतिशतसम्म महँगो पाइएको छ। बैंकहरूले तोकेको स्थिर ब्याजदर हाल कायम भएको आधार दरभन्दा दोब्बरसम्म बढी छ।
असोज मसान्तसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ७.६५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसमा बैंकले आफूखुसी प्रिमियम दर राख्न सक्छन्। अहिले अधिकांश बैंकले २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम थपेर प्रवाह गर्दै आएका छन्।
बैंकहरूले व्यक्तिगत आवधिक प्रकृतिको कर्जामा घटबढ नहुनेगरी तोकेको स्थिर ब्याजदर भने १४ प्रतिशतसम्म छ।
माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले अहिले बैंकबाट यस्तो स्थिर ब्याजको ऋण लिन आकर्षण नदेखिएको बताए।
‘सुरुआतमा स्थिर ब्याजदर केही महँगो छ। तर पछिलाई ढुक्कै हुने हो। तर ऋणीले पछिका लागि भन्दा पनि अहिलेकै लागि सोच्ने रहेछन्। स्थिर ब्याजदर तोकेका त छौं, तर ऋण खासै गएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
नबिल बैंक रिटेल लेन्डिङ प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले पनि अहिले परिवर्तनशील ब्याजदर एकदमै घटेकाले पनि स्थिर ब्याजदरमा आकर्षण नभएको बताइन्।
‘१०-१५ वर्षसम्मका लागि यस्तो कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। तर हामीले लिने मुद्दती निक्षेपको अवधि ५ वर्षभन्दा बढी हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। तर १० वर्षपछि कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न। त्यसैले स्थिर ब्याज केही महँगाे छ।’
नबिल बैंकले अहिले वार्षिकोत्सव विशेष अफरअन्तर्गत ७‍‍‍‍‍‍.५० प्रतिशत दरमै आवास ऋण दिइरहेको छ। यही ऋणको स्थिर ब्याजदर भने १० देखि ११ प्रतिशतसम्म छ।
‘यो साढे ७ प्रतिशत ब्याज पनि एक वर्षसम्म बढाउँदैनौं। त्यसपछि पनि नबढ्न सक्छ। ऋणीले तत्कालका लागि त सस्तो ब्याज नै खोज्ने भएकाले स्थिरमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन्।
अन्य बैंकबाट पनि यस्तो प्रकारको कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। अझै ब्याजदर घट्ने अनुमानले पनि ऋण नगएको हुन सक्ने कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
बैंकहरूमा अहिले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ। तरलता पर्याप्त भएकैले राष्ट्र बैंकले बुधबार ५० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप बोल-कबोलका माध्यमबाट उठाएको छ। तर अहिलेको तरलता सीमित अवधिका लागि हुने कतिपयको अनुमान छ। रकम अभाव भए ब्याजदर बढ्न सक्नेछ।
लामो अवधिको निक्षेप कमै पाइने भएकाले यस्तोमा दिने ब्याज पनि केही बढी हुने बैंकर्स बताउँछन्। भोलिका दिनमा ब्याजदर घटबढ भए त्यसको जोखिम लिन नचाहनेलाई स्थिर ब्याजदर उपयुक्त हुन सक्छ।
तर ब्याजदर घट्दा वा सुरूआतमै फाइदा लिने र बढ्दा जोखिम लिन खोज्नेलाई भने परिवर्तनशील ब्याजदर उपयुक्त देखिएको छ। किनकी बैंकहरूले परिवर्तनशीलभन्दा स्थिर ब्याजदर बढी राखेका छन्।
यसअघि घर र गाडी किन्दा व्यक्तिगत नाममा ऋण लिइसकेकाले पनि स्थिर ब्याजदर कायम हुनेगरी बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्छन्।
ऋण चुक्ता अवधि जति धेरै भयो, बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर त्यति नै बढी तोकेको पाइन्छ। अर्थात् एउटै बैंकबाट घर-गाडीका लागि १५ वर्षमा तिर्ने गरी लिएको कर्जाभन्दा ५ वर्षमा तिर्नेको ब्याजदर कम पाइन्छ।
कुन बैंकको स्थिर ब्याजदर कति?
ग्लोबल आइएमईले पाँच वर्षका लागि घर कर्जा लिनेलाई ब्याजदर ७.९९ देखि ८.९९ सम्म तोकेको छ।
दस वर्षका लागि ९ देखि ९.९९ सम्म र पन्ध्र वर्षका लागि ऋण लिँदा १० देखि १०.९९ सम्म स्थिर ब्याजदर छ।
त्यस्तै गाडी ऋण (अटोलोन) मा पाँच वर्षसम्मका लागि ८.९९ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म र पाँच वर्षभन्दा बढीका लागि १० देखि ११.९९ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदर छ।
बैंकको आधार दर भने ७.२५ प्रतिशत मात्रै छ।
कुमारीले एकदेखि पाँच वर्षका लागि साढे १० प्रतिशत तथा पाँच वर्ष बढीका लागि ११ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर तोकेको छ। असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ८.४० प्रतिशत छ।
माछापुच्छ्रेमा पाँच वर्षसम्मका लागि घर कर्जा लिँदा स्थिर ब्याजदर ९.८९ प्रतिशत, दस वर्षसम्मका लागि १०.८९ प्रतिशत छ। दस वर्षभन्दा बढीका लागि घरकर्जा लिनेलाई स्थिर ब्याजदर ११.८९ प्रतिशत छ।
गाडी कर्जातर्फ पाँच वर्षका लागि ९.९९ प्रतिशत, दस वर्षसम्मका लागि १०.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर छ। असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर जम्मा ८.३१ प्रतिशत छ।
एभरेष्टले घर कर्जा (१ करोडसम्म) पाँच वर्षसम्मका लागि १०.९८ प्रतिशत मात्रै भने पाँचदेखि दस वर्षसम्मका लागि ११.९८ प्रतिशत छ। दस वर्ष बढीका लागि को स्थिर ब्याजदर १३.४८ प्रतिशत तोकेको छ।
बैंकले एक करोड रूपैयाँ बढी सोही ऋण दिन भने केही बढी दर तोकेको छ। एक करोड माथिको घर कर्जा पाँच वर्षसम्मका लागि लिन ११. ४८ प्रतिशत ब्याजदर पर्छ। त्यस्तै पाँचदेखि दस वर्षसम्मलाई १२.४८ प्रतिशत छ भने दस वर्ष बढीका लागि १३.९८ प्रतिशत ब्याजदर पर्छ।
स्थिर दरमै गाडी किन्नेलाई ऋण दिन ३ वर्षका लागि १०.७३ प्रतिशत, ५ वर्षका लागि ११.४८ प्रतिशत र १० वर्षका लागि १२.४८ प्रतिशत छ।
असोज मसान्तसम्म एभरेष्ट बैंकको आधार दर जम्मा ७.०७ प्रतिशत मात्रै छ।
एनआइसी एसिया बैंकः
एनआइसीले घर कर्जामा पाँच वर्षसम्मका लागि १३ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने दस वर्षका लागि १३.५ तथा १५ वर्षका लागि १४ प्रतिशत छ।
त्यस्तै सवारी कर्जातर्फ पाँच वर्षसम्मको १३ प्रतिशत, सात वर्षको १३.५० र दस वर्षका लागि १४ प्रतिशत तोकेको छ। असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर जम्मा ६.५ प्रतिशत छ।
नबिल बैंकले पाँच वर्षसम्मका लागि घर र गाडी ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत तोकेको छ। त्यस्तै पाँचदेखि दस वर्षका लागि १०.५ र दसदेखि पन्ध्र वर्षसम्मका लागि ११ प्रतिशत छ।
असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.६८ प्रतिशत छ।
सानिमाले १३ महिनासम्मका लागि दिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याजदर ८.२५ प्रतिशत तोकेको छ। दुई वर्षसम्मका लागि ९.५ प्रतिशत, तीन वर्षका लागि ११ प्रतिशत र तीन वर्ष बढीका लागि १३ प्रतिशतसम्म हुने जनाएको छ।
बैंकको आधार दर ७.७३ प्रतिशत छ।
सिद्धार्थले डेढ करोड रूपैयाँसम्म पाँच वर्ष सम्मका लागि घर कर्जा लिनेलाई ८.९९ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ।
पाँचदेखि दस वर्षसम्मका लागि ९.२५ देखि ९.९९ प्रतिशतसम्म छ भने दस वर्षमाथिका लागि ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म तोकेको छ।
सवारी कर्जामा पाँच वर्षसम्मका लागि ८.९९ देखि ९.९९ सम्म तथा दस वर्षका लागि ९.५० देखि १०.९९ प्रतिशतसम्म छ। असोज मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ८.१० प्रतिशत छ।
प्राइम कमर्सियल बैंकः
प्राइम कमर्सियलले पाँचदेखि बीस वर्षसम्मको घर कर्जाका लागि ११ देखि १२.५ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदर तोकेको छ। बैंकको आधार दर ८.१२ प्रतिशत छ।
राष्ट्रिय वाणिज्यले सात वर्षसम्मको गाडी कर्जा ९.५ प्रतिशत तोकेको छ। घर कर्जाका लागि पाँच वर्षसम्मको ९ प्रतिशत, दस वर्षसम्मको १० र पन्ध्र वर्षका लागि ११ प्रतिशत छ। बैंकको आधार दर सबभन्दा कम ५.७४ प्रतिशत छ।
प्रभुले पाँच वर्षसम्मको घर कर्जाका लागि ९.९९ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ भने दस वर्षका लागि १०.९९ प्रतिशत छ।
पाँच वर्षसम्मको गाडी कर्जाको १०.२४ र दस वर्षसम्मका लागि ११.२४ प्रतिशत ब्याजदर छ। प्रभुको आधार दर ७.३९ प्रतिशत छ।
केही बैंकले सार्वजनिक गरेको स्थिर ब्याजदर उदाहरणका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। यीबाहेक अन्य बैंकले पनि स्थिर ब्याजदरको ऋण दिनेगरी अवधिअनुसारको दर तोकेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, ०४:४०:००